6 Siyaabood Oo Gabdhaha Soomaaliyeed Loo Guursado | shumis.net
Home » galmada » 6 Siyaabood Oo Gabdhaha Soomaaliyeed Loo Guursado
6 Siyaabood Oo Gabdhaha Soomaaliyeed Loo Guursado
La Bixida Hablaha: Waa qaab guursi caan ah oo illaa maanta ka jira dalka Soomaaliyeed, miyi iyo magaalaba, marka hore way isa shukaansadaan ka dibna way isla baxaan. Waxaana la isla tagaa meel masafo ah oo lagu meheriyo.
-Qudba Siro: Waa guur qarsoodi ah oo ee ay og yihiin labada is guursatay, wadaadka wax mehershay iyo markhaatiyaasha oo keliya. WAana waxa ay ku heshiiyeen labada is guursatay.
-Dumaal: Waa hab dhaqan guursi ah oo muddo soo taxnaa illaa hadana si caam ahaana ugu jira dhulka Soomaaliyeed. Waxaa uu dhacaa markii naag nin leh uu ka dhinto, waxa naagtii dumaala marxuumka walaalihiis…
-Bixinta Hablaha: Waa hab dhaqan guur ee soo taxnaa muddo dheer, illaa hadana waa
mid si caam ahaan ah ugu jira giyiga soomaalidu degto.
-Heeranka Hablaha: Waxa uu ahaa qaab guursi hore oo hablaha soomaaliyeed iyaga oo calaf doon ah inta ay reerkooda ka tagaan bay cido kale u tagaan. Inta badan hablahaas xil weyn baa la iska saari jiray.
-Udub Qabsi: Waa hab gabadhu inta ay nin dush ka jeclaato gasho ninka gurigooda, waxayna ay qabsataa udub-dhexaadka ama sariirtiisa, waxaan caado inta badan ah in halkaas gabadha lagu meheriyo ama xaal weyn la siiyo. Nooca guurkani illaa hada wuu jiraa.
Title: 6 Siyaabood Oo Gabdhaha Soomaaliyeed Loo Guursado
Posted by galmada Net, Published at March 01, 2016 and have 0 comments